टुवोर्ग वियर कम्पनीले ८७ करोड अन्तःशुल्क तिर्न बाँकी ! | NepalDut
सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको छ ।
कार्यालयले २ आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रहेको ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ ७ दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालका अनुसार आव २०७३/७४ को रु ५३ करोड २१ लाख ५७ हजार ६ सय १५ र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को रु ३३ करोड ९३ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्व शुल्क दाखिला गर्न पत्राचार गरेको हो । कार्यालयले साउन १२ गते नै पत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले साउन ८ गते यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएपछि कर सङ्कलन गर्ने बाटो खुलेको हो । २ प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले ३.५ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि राजश्व कार्यालयले सोको कर निर्धारण गरेको थियो ।
सोपश्चात् ब्रुअरीविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले यही साउन ७ गते सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेको थियो ।
सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनु भनी आदेश जारी गरेका थिए । यससँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालयले ब्रुअरीको अन्तिम कर निर्धारण गर्न बाटो खुल्ला भएको हो ।
ब्रुअरीका कानून व्यवसायी संकल्प क्षेत्रीले पत्र बुझेको र कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कर तिर्ने वा प्रशासकीय पुनरावेदन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ ।
ब्रुअरीले यसअघिका २ वर्षमा पनि सोही शीर्षकमा कर तिर्न बाँकी छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को रु. ७ करोड, ०७१/०७२ को रु १५ करोड र ०७२/०७३ को रु २९ करोड अन्तःशुल्क बुझाउन बाँकी छ ।
अघिल्ला २ वर्षको राजश्व न्यायाधीकरण र पछिल्लो १ वर्षको सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले टुंगो लाग्न नसकेको रिजालले जानकारी दिए ।
उद्योगको फ्लोमिटर राखेर चलेको अवस्थामा ३.५ प्रतिशतसम्म जर्ती कटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । फ्लोमिटर नरहेको र बिग्रिएको अवस्थामा २ प्रतिशत मात्रै जर्ती काट्न सक्ने छ तर ब्रुअरीले फ्लोमिटर राखेर पनि चलाएको छैन तर ३.५ प्रतिशत जर्ती दाबी गर्दै आएपछि हरेक आवमा कर निर्धारणको विषयमा विवाद हुँदै आएको हो ।
विसं २०४५ देखि नवलपरासीको मुकुन्दपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको ब्रुअरीले गत आवमा रु ११ अर्ब अन्तःशुल्क तिरेको छ । त्यसअघिका २ वर्षमा रु ८ अर्ब र रु ५ अर्ब अन्तःशुल्क तिरेको थियो ।
यस कार्यालयमा संकलन हुने अन्तःशुल्कको ४० प्रतिशत गोर्खा ब्रुअरीले तिर्ने गर्दछ । सो उद्योगले गोर्खा, काल्सबर्ग र टुबर्ग बियरसँगै एप्पल साइडर उत्पादन गर्दै आएको छ ।